ဆီးရီးယား လက်နက်သိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲ၊ ဒါဇင်နှင့်ချီ သေဆုံး - Yangon Media Group
ဆီးရီးယား လက်နက်သိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲ၊ ဒါဇင်နှင့်ချီ သေဆုံး
ဘေရွတ်၊ သြဂုတ် ၁၃
သူပုန်များသိမ်းပိုက်ထားသည့် ဆီးရီးယားအစ်ဒ်လစ်မြို့ရှိ လူနေအိမ်ရာများတွင် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းများသိုလှောင်ထားခဲ့ရာ သြဂုတ် ၁၂ ရက်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့၍ အနည်းဆုံးလူ ၃၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအထဲတွင် ကလေး ၁၂ ဦးပါဝင်ကြောင်း စစ် ရေးအကဲခတ်သမားများက ပြော ကြားလိုက်သည်ဟု ရိုက်တာသတင်းက သြဂုတ် ၁၃ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှုမှာ ဆာမာဒါမြို့ ၌ဖြစ်ကြောင်း၊ တူရကီနယ်စပ်နှင့်နီးပြီး မြို့တော်အစ်ဒ်လစ်၏မြောက်ပိုင်း၌ဖြစ်ကြောင်း ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့် ကြည့်သူများအဖွဲ့က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆီးရီးယား၏ ခုနစ်နှစ်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်၌ အိမ်ရာမဲ့ဖြစ်နေသူ များမှာ အဆိုပါအဆောက်အအုံ၌ နေထိုင်လျက်ရှိကြကြောင်း၊ ထိုအ ဆောက်အအုံကို လက်နက်ရောင်း ချသူများကလည်း အသုံးပြုကြ ကြောင်း လေ့လာသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားဦးထုပ်ဖြူဆောင်း ကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်သမားများ ကလည်း သေဆုံးသူ ၃၆ ဦးရှိပြီး ဒါဇင်များစွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ အရုဏ်တက်ပေါက်ကွဲမှု၌ လူ ၁ဝဦးကို အပျက်အစီးများ ကြားမှ အသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ၌ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရခြင်း အ ကြောင်းရင်းကိုမူ မသိရသေးဟု ၎င်းတို့ကဆိုသည်။ အစ်ဒ်လစ်မြို့မှာ သမ္မတဘာ ရှာအယ်လ်အာဆတ်အား ခုခံသည့် သူပုန်များ၏ နောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူထားသည့်နယ်မြေဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
၁ဝ ရက်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေသော မြန်မာတစ်ဦးကို ဘန်ကောက်ဆေးရုံတွင် ပြန်တွေ့
တိုင်းရင်းသားများ ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ချင်စိတ် မရှိအောင် အာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် နိုင်ငံေ?
ယခုနှစ် မန္တလေးကျုံးဘေးရှိ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များတွင် ရေကစားခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင်လျှင် ကျပ်ငါးထော
ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် လက်ကျန်ပွဲများကို သာမက အာဖရိကဖလား ပြိုင်ပွဲကိုပါ ဘိုင်လီ လွဲချော်
မင်းသမီး ဂျက်စီကာ ချက်စတိန်း ပါဝင်မည့် ရုပ်ရှင်ပြသခွင့် Netflix က ဝယ်ယူ
ပတ်ဂျီဆန်၏ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို ဆွန်ဟောင်မင် ချိုးဖျက် ၊ ကစားသမားများကို သတိ?
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပင်မ အဆောက်အအုံကြီးရှေ့တွင် ပထမအကြိမ် ဆီမီး ၅ဝဝဝ ပူဇော်မည်